> Resource > Windows > Sida loo ka PC soo dir SMS si Mobile Phone
Ugu hal mar ah ama mid kale, inta badan oo naga mid ah waxay leeyihiin waayo-aragnimo ah in fariinta qoraalka waa sidaas dheer iyo iyaga khaanada helo runtii niyad iyo wax aad looga xumaado. Nasiib wanaag, Maamulaha MobileGo Android, waxaad kaliya ku qor kartaa farriin qoraal ah oo degdeg ah oo sax ah la keyboard computer iyo weeraray diro.
Wondershare MobileGo for Android waxay bixisaa qaar ka mid ah muuqaalada maaraynta phone Android. Chief iyaga ka mid ah waa awood u leh inay SMS ka PC soo dir telefoon kasta oo mobile. Sida fikradda? Bal aynu eegno sida ay u SMS ka PC soo dir mobile arrintan Android Manager. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, fadlan akhri maqaalka ah ee sida loo SMS ka Mac diro .
Fiiro gaar ah : tutorial ayaa si fudud kuu sheegayaa sida loo isticmaalo Wondershare MobileGo for Android si SMS ka computer Windows diro. Sida user Mac ah, waxaad isku dayi kartaa tutorial ka midka ah ee aad Mac.
Talaabada 1: Calan Android la MobileGo for Android
Si aad u billowdo leh, download iyo rakibi MobileGo for Android aad kombuutarka.
Marka aad dhammeysato rakibidda Tababaraha this Android, waa in aad u abuurtaan. Markaas, xirmaan telefoonka aad Android inay PC ka via Wi-Fi (kaliya availble marka aad la isticmaalayo version Windows) ama cable USB. Markii taleefan aad Android u muuqataa in uu furmo suuqa ugu weyn, guji "SMS" galeeysid bidix si ay u soo galaan suuqa kala SMS ah.
Fiiro gaar ah: Tababare MobileGo Android si buuxda u taageersan dhammaan taleefanada Android iyo kiniiniyada sida / HTC / Google / Motorola / Sony Ericsson / Samsung. Tani waxaa ay ka buuxaan liiska taageeray telefoonada Android .
Talaabada 2: SMS ka PC dir Mobile
Hit "New" dusheeda. In uu furmo suuqa keenay in, ay dooran aqbalana farriin (s) iyo geli fariin uu furmo suuqa dalacsiiyay. Marka aad dhamaysato fariinta, guji "Send".
Ma doonaysaa in ay si dhakhso ah u fahmaan tallaabooyinka? Fadlan ciyaari tutorial video hoose.